State Counsellor Urges Fishery Sector to Enter Global Market | Myanmar Business Today
HomeBusinessState Counsellor Urges Fishery Sector to Enter Global Market
State Counsellor Urges Fishery Sector to Enter Global Market
ခရင်းကောင် (သို့) ကရင်းကောင်
Daw Aung Sann Su Kyi, State Counsellor of Myanmar, urged the fishery sector to push its way into the global market.
“Through innovative and creative ideas, the fishery sector needs to promote its products in both local and global markets, which will lead to increased export,” Daw Aung San Suu Kyi said during the online meeting held today.
She stated that fishery products from Myanmar such as barnacle, oyster, and soft-shell crab are rare and expensive in European countries.
“If you can make certain fishery products, which have been already popular in Myanmar, known in the international market and create demand for it, it will be good for the country’s fishery sector,” she added.
Despite the interference of the COVID-19 in trade transactions, the Ministry of Commerce has estimated that Myanmar will earn over $1 billion this fiscal year.
Last year, the country made over $730 million from fishery export, and the authorities are trying to boost the export this fiscal year.
Myanmar exports fishery products to over 40 countries including China, Thailand, and Japan. It made $482 million in the 2014-15 fiscal year, $502 million in the 2015-16 fiscal year, $652 million in the 2016-17 fiscal year, and $699 million in the 2017-18 fiscal year.
Written by Tayzar Bhone Myint/ translated by Min Thu Aung
ရေထွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍ၌ ဆန်းသစ်တီထွင်သောစိတ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဝင်တိုးရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
“ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်း တီထွင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အပေါ်မှာလည်း တိုးလို့ရအောင်လို့ ပြည်တွင်းမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေလာတဲ့အခါကြတော့ ပြည်တွင်းမှာ စားတတ်သွားရင် ပြည်တွင်းမှာ အရသာတွေ့သွားရင် နောက်ဆိုပြည်ပကို ပို့ကုန်အနေနဲ့ အများကြီးတန်ဖိုးရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က COVID-19 နှင့် သားငါးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သော ရေထွက်ပစ္စည်းတချို့သည် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် စျေးကြီးကြောင်း၊ ခရင်း၊ ကမာများ၊ ဂဏန်းပျော့များသည် ဥရောပတွင်စျေးကြီးကာရှားပါးပြီး တချို့သည် ဂဏန်းပျော့ ရှိမှန်း မသိရှိကြကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။
“ငါးပုစွန်တွေမှာလည်း နည်းနည်းပိုပြီးတော့ စွန့်စွန့်စားစားလေးနဲ့ အသစ်ထွင်တာမျိုးပေါ့။ အပြင်လူတွေ မသိသေးတဲ့ ငါးမျိုး ကိုယ့်ပြည်တွင်းကတော့ စားတယ်သုံးတယ်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပကတော့ မသိတဲ့ငါးမျိုးတွေကို ပြည်ပသိအောင်လို့ ပြည်ပကလိုချင်အောင်လို့ ပြည်ပကနေတောင်းဆိုချက်တွေများလာအောင်လို့ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မရှိတဲ့ရေထွက်ပစ္စည်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီးတော့တောင်မှ အကျိုးရှိနိုင်သေးတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကပြောသည်။
COVID – 19 ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့မှုသည် မကြာမီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယံကျော် ရနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
မြန်မာ့ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုသည် ကုန်ခဲ့သောနှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၇၃၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းမွေးမြူရေး စွမ်းအားများတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးကပြောကြားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကဏန်းအပါအဝင် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပြီး ယင်းနောက် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ကိုလည်း တင်ပို့လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈၂ သန်း၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၂ သန်း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅၂ သန်းနှင့် ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉၉ သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleEUR 1.43 Million Project for the Elderly and Disable
Next articleGovt Allocates K25 Bln for ‘Cash for Work’ Program